“आयुष्मान र शिल्पा”को उत्कृष्ट गीत “रानु कम्मर” (भिडियो हेर्नुहोस)
आयुष्मान देशराज जोशी र अभिनेत्री शिल्पा मास्के अभिनित चलचित्र ‘सानो मन’ को पहिलो गीत ‘रानु कम्मर’ सार्वजनिक भएको छ । आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको ‘रानु कम्मर’को भिडियोमा बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका पर्सनल डान्स ट्रेनर साजन सिंहले कोरियोग्राफी गरेका हुन् ।
सिमा राई र सुयोग गुरुङको स्वर रहेको गीत लाई कल्याण सिंह र रोमन बज्रचार्यको संगीत रहेको छ । सुयोग गुरुङको डेब्यु निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्रको यस गीतमा तीस लाखको लागत लागेको भनिएको छ । आयुष्मान र शिल्पा फिचर्ड गीतको रिलिजसँगै चलचित्रको रिलिज मिती पनि तोकिएको छ ।
असार २० गतेलाई रिलिज मिती जुराइएको चलचित्रमा आयुष्मान शिल्पाको साथमा गौरी मल्ल, विशाल पहारी, शिशिर वाङदेल, रश्मी भट्टलाई पनि देख्न सकिन्छ ।आयोजित कार्यक्रममा अभिनेत्री गौरीले अभिनेता आयुष्मानको नृत्यको खुलेर तारिफ गरिन् । स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठपछि आफूलाई आयुष्मान राम्रो नृत्य गर्ने र नृत्यमा निकै मिहिनेत गर्ने कलाकार लागेको समेत उनले बताइन् । भिडियो ।
सबै बैंकको एटिएम मेसिनमा ३० दिनभित्र नेपाली भाषा राखिनुपर्ने
तपाईंलाई आवश्यकपर्ने पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कसरी निकाल्नुहुन्छ ? एटिएम मेसिनको प्रयोग गर्नुहुन्छ वा चेकमार्फत गर्ने गर्नुभएको छ ? साक्षर व्यक्तिले सहजै रुपमा एटिएम मेसिनमा कार्ड राखेर सहजै पैसा निकाल्न सक्ला । निरक्षर, कम अध्ययन भएका वा अङ्ग्रेजी भाषा नजान्नेका लागि एटिएमको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा नै समस्या हुने गरेको छ ।
नेपाली भाषा प्रयोग गरी एटिएम चलाउन सकिने व्यवस्था गरी सो को जानकारी गराउन समेत केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र नेपाली भाषाको प्रयोग गरी कारोवार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको नपाइएमा भुक्तानी तथा फर्छ्याैट ऐन, २०७५ अनुसार कारवाही गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।